Fandraisana Relais du Rova
Tongasoa - Welcome - Bienvenue
Ny toerana fandraisam-bahiny sy fisakafoanana " RELAIS DU ROVA " dia ho hitanao eny Ambohijanaka Soavinimerina lalam-pirenena faha 3 mankany Ambohimanga Rova ary 16km miala ny renivohitra.
Tsara toerana, mangina ary anaty natiora ; ho anareo izay leo ny tabataban’ny renivohitra,mila rivotra madio sy fahanginana dia anisan’ny ahitanareo izany ato amin’ny “RELAIS DUROVA”.
Manana efitrano fatoriana telo karazana izahay:
Efitrano lehibe 2 sy salasalany fito (5) ary tena lehibe iray (1) izay samy misy fandriana lehibe ho an’olondroa , efitrano fidiovana ,rano mafana ,vata fahita lavitra ao anatiny.
Misy koa trano iray mahaleo tena misy efitra fatoriana lehibe telo (3), toerana fandraisam-bahiny ary toerana fandrahoana sakafo,misy fandriana lehibe ho an’olondroa, efitrano fidiovana sy rano mafana ary vata fahita lavitra avokoa ireo.
Manana efitrano fivoriana mahazaka olona 30 izahay;
Ary misy efitrano fisakafoanana antonona olona 40 ihany koa eto amin'ny Relais du Rova.
Mandray lanonana toy fampakaram-bady, fifamofoana, tsingerin-taona samihafa; ary anisan’ny mampiavaka anay ny fandraisana lanonana eo antokotany misy ahimaitso, natao hisakafoanana
Manao nahandro Malagasy izahay sady manao ny nahandro tandrefana,ny pizza,ny kitonotono,ary ny mofomamy isankarazany.
Misy toerana natokana ilalaovan’ny ankizy ary toerana fiantsonan’ny fiara ary azo antoka.
5km miala eto amin’ny toerana misy ny trano fandraisam-bahiny no misy ny Rovan’Ambohimanga ary 7km kosa no misy ny Vohitra Ambohitrabiby. Tsy lavitra eo ihany koa no misy ny lavabaton’Ambodifahitra sy ny tanàna misy ireo mpanenona lamba landy- Fonohasina no anaran'io toerana io.
Maro ihany koa ireo tanàna sy toerana mahafinaritra azo tsidihina atao dia an-tongotra na am-bisikileta.
Ho anareo monina na mila ravinahitra eto an-toerana na any ampitan-dranomasina dia tongava fa handray anareo am-pitsikiana ary vonona ny hanome fahafaham-po anareo izahay izay Malagasy toa anareo ihany.